Silipo fantsona, Silika famehezana Strip, Silket Gasket - Jujie
Jiangyin Jujie Rubber & Plastic Co., Ltd, natsangana tamin'ny taona 2007, dia orinasa manavao izay manampahaizana manokana amin'ny famokarana sy ny fampivoarana ny vokatra vita amin'ny silika. Izahay dia manamboatra fantsom-pandehanana silipo avo lenta, fantsona fanamafisam-peo silika ary singa famehezana ho an'ny indostrian'ny herinaratra, elektronika, jiro, fanafody, sakafo, simika, fiara, fanamboarana sambo ary indostrian'ny milina.
HITA AMIN'NY 2008
FIAINANA 11 TAONA
Mihoatra ny vokatra 100
Mihoatra ny 20 tapitrisa
insulateur elektrika vita amin'ny silipo vita amin'ny kofehy vita amin'ny silipo ...
2020 fanoherana sinoa lasitike malefaka sil ...
fomba samy hafa sombin-javatra silikola mafana conducti ...
2020 Rubbe silika manohitra kalitao avo lenta ...
Fitehirizana ny fantson-plastika Ny efitrano fitehirizana dia tsy maintsy milamina, misy rivotra ary maina ampy. Ny mari-pana ambony manodidina ny + 45 ° C raha tsy misy fikorianan'ny rivotra dia mety hiteraka fahasimbana maharitra amin'ny fantson-plastika. Azafady mba mariho fa na dia ao anaty kofehy fantsom-pifandraisana aza, io mari-pana io dia azo jerena amin'ny tara-masoandro mivantana ....
Ahoana no tsy ahitan'ny mpamily taloha ny fantson'ny fiara!
Raha te hitondra fiara tsara ianao dia tena ilaina ny fantsom-piarakodia! Betsaka ny rindranasan'ny fantsom-piarakodia amin'ny fiara, ary avelao aho hilaza aminao amin'ny antsipiriany! Fantatrao tsara ve ity seho ity? Etsy andaniny, rehefa sendra toetoetran'ny lalana sarotra ny fitetezana fiara dia matetika no sarotra kokoa noho ny ...